OTU ESI EME KA OLU DI NA LAPTỌỌPỤ NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Otu esi eme ka olu di na laptọọpụ na Windows 7
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-eche nsogbu dị otú a ihu na ndị na-ekwu okwu na-arụ ọrụ n'ime laptọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ arụmọrụ na-ejikarị ejikọta ya dị nnọọ jụụ, oke olu ahụ ezughị oke. N'okwu a, ị ga-enwe ike ịrụ ọtụtụ ihe omume ndị ga-enyere aka iwelie olu ahụ ntakịrị, ọbụnakwa mee ka ụda ahụ dị mma.
Mee ka ụda dị na laptọọpụ dị elu na Windows 7
E nwere ọtụtụ ụzọ dị mfe isi mee ka olu dị na ngwaọrụ ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ha enweghị ike ịba ụba dị ukwuu, mana jide n'aka na site n'ịmechaa otu n'ime ha, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị ga-eme ka olu dị elu karịa pasent iri abụọ. Ka anyị lebakwuo anya na usoro ọ bụla.
Usoro 1: Mmemme iji dozie ụda ahụ
Ntinye ntụrụndụ nke ntụrụndụ na-enye aka ọ bụghị nanị idezi ya ma dozie ya na ngwaike ụfọdụ, mana na ụfọdụ nwere ike iwelie olu. A na-eme usoro a site na ịhazi nhazi ma ọ bụ gbanwee mmetụta ndị a rụpụtara, ọ bụrụ na ọ bụla. Ka anyị lebakwuo anya na omume niile na-eji ihe atụ nke usoro ihe omume maka kaadị ndị dị na Realtek:
Realtek HD Audio bụ ụda ọkwọ ụgbọala kachasị ọnụ. A na-arụnye ya na akpaghị aka mgbe ị na-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala site na diski nke na-abịa na ya, ma ọ bụ site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ. Otú ọ dị, ịnwekwara ike ibudata ngwugwu codecs na ọrụ dị iche iche sitere na saịtị ndị ọrụ.
Hụkwa: Usoro kachasị mma maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Mgbe echichi, akara ngosi ga-apụta na panel ngosi. "Realtek HD Dispatcher", ịkwesịrị igodo bọtịnụ akaekpo pịa ya ugboro abụọ gaa n'ihu.
Naanị ị ga-aga tab "Mmetụta Okpu"ebe a na-edozi nkwụsị aka ekpe na aka nri ziri ezi, a na-edozi ọkwa dị elu ma dozie nhazi ahụ. Ntuziaka maka ịtọlite ​​ya bụ otu ihe ahụ dịka ndị a ga-atụle na nkọwa ndị ọzọ "Usoro 3".
Mgbe ịmechara omume niile, ị ga - enwe mmụba dị elu nke ihe dịka 20%. Ọ bụrụ na ihe kpatara Realtek HD Audio adịghị adabara gị ma ọ bụ na okwesighi arụmọrụ ya, mgbe ahụ, anyị na-atụ aro na ị ga-eji otu n'ime mmemme ndị yiri nke ahụ iji dozie ụda ahụ.
Gụkwuo: Mmemme iji gbanwee ụda ahụ
Usoro 2: Mmemme iji welie ụda ahụ
O di nwute, ihe ndi e wuru na mmemme ndi ozo maka igbanwe uzo adighi enyere aka na ebuli olu n'oru o choro n'ihi na enweghi ihe ndi kwesiri ekwenye. Ya mere, nhọrọ kachasị mma na ọnọdụ a ga-eji software pụrụ iche eme ka ụda ahụ dị elu. Ka anyị were ya site na ihe atụ DFX Audio Enhancer:
N'elu nchịkọta isi ahụ, e nwere ọtụtụ ihe ntanetị nke na-ahụ maka ịdị omimi, olu, ọkwa mmepụta na mweghachi nke ụda. Ị na-agbanye ha ozugbo, na-ege ntị na mgbanwe ahụ. Nke a na-agbanwe ụda kwesịrị ekwesị.
Na mgbakwunye, usoro ihe omume ahụ nwere nhazi nhazi. Ọ bụrụ na a hazie ya nke ọma, ọ ga-enyere aka ịwelite olu. Ọtụtụ mgbe, mgbagwoju anya nke ihe nkedo niile na-enyere 100% aka.
Enwere ndepụta nke profaịlụ nke ntọala nhazi. Ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime ha, nke ga-enyekwa aka ịba ụda olu.
Ihe ndi ozo ndi ozo na-eme otu ihe. Maka ama ndi ozo banyere ndi oru kachasị mma nke software a i nwere ike n'isiokwu anyi.
Gụkwuo: Ngwanrọ mmezi nke Kọmputa.
Usoro nke 3: Os Ngwaọrụ Standard
Anyị niile maara nke ọma banyere akara ngosi a na ebe ngosi dị ka "Ndị ọkà okwu". Site na ịpị bọtịnụ akaekpe na ya, ị ga-emepe obere windo nke nwere ike gbanwee olu ahụ site n'ịbị ụdọ. Nke mbụ, ọ bara uru ịlele ma ọ bụ 100% ka ọ na-atọpụ nke a.
N'otu windo ahụ, rịba bọtịnụ ahụ "Ngwakọta". Ngwaọrụ a na-enye gị ohere ịhazi ụda na ngwa ọ bụla iche iche. Ya mere, ọ dịkwa mma ịlele ya, karịsịa ma ọ bụrụ na a hụ nsogbu ụda olu na otu egwuregwu, mmemme, ma ọ bụ ihe nchọgharị.
Ugbu a, ka anyị na-aga n'ihu ịkwalite ụda ahụ site na ngwaọrụ Windows 7 dị mma, ọ bụrụ na 100% adighi-elezi ọkwọ ụgbọ ahụ. Iji hazie gị mkpa:
Họrọ taabụ "Ụda".
Ị banye ozugbo "Playback"ebe ịkwesịrị ịhọrọ ọkà okwu na-arụ ọrụ, pịa aka na ya wee gaa "Njirimara".
Na taabụ "Ọkwa" weghachite ọzọ na 100% wee pịa "Ụkwụ". Ịkwesiri ijide n'aka na nkwụnye aka ekpe na aka nri bụ otu ihe, ebe ọ bụ na obere iwe nwere ike iduga ụda olu.
Ugbu a, ọ bara uru ịga na taabụ ahụ "Ndozi" ma fanye igbe ahụ "Ejikọta".
Ọ na-adịgide naanị iji dozie nhazi ahụ. Enwere ọtụtụ profaịlụ, nke na n'ọnọdụ a ị nwere mmasị n'otu "Ike". Echefula ka ịpịchaa nhọrọ ahụ "Tinye".
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na-enyere gị aka ịmepụta profaịlụ gị site na ịgbanye ihe ọ bụla na-agụ nhazi ọhụụ. Gaa na windo ntọala site na ịpị bọtịnụ nwere oghere atọ, nke dị n'aka nri nke menupụtapụta na profaịlụ.
Ọ bụrụ, mgbe ịmechara omume ndị a niile, ị ka na-enweghi obi ụtọ na ụda ahụ, mgbe ahụ ọ na-anọgide na-eme ihe iji mee ihe omume pụrụ iche iji dozie ma gbasaa olu.
N'isiokwu a, anyị na-ele anya ụzọ atọ na-amụba olu na laptọọpụ. Mgbe ụfọdụ ngwaọrụ ndị a wuru enyere aka, ma nke a abụghị mgbe niile, ọtụtụ ndị ọrụ nwere ibudata mmemme ọzọ. Site na ọnọdụ ziri ezi, ụda ahụ kwesịrị ịgbasa ruo pasent 20 nke ala mbụ.